Izingane zethu - injabulo yethu. Zikhula nokuthuthukisa. Minyaka yonke ingane ezingasho ifunda uyasijabulela amathoyizi entsha, uthola abawujabulela. Ukuze ingane yakho ukuthuthukisa lokudala, kuzomele udale zonke izimo salokhu. Zama ukuthenga amathoyizi kanye imidlalo ibhodi, kuye ngeminyaka yazo, amakhono kanye izinto zokuzilibazisa.
Namuhla, abazali abaningi bakhetha silungise nezingane, ne ezihlukahlukene izibalo kusukela alo ephepheni. Ungakwazi kalula ukuklama nengane ofinyelele eneminyaka emine ubudala. Ngokwesibonelo, mbonise indlela yokwenza iphepha isibhamu. Ephendula umbuzo othi "indlela yokwenza isibhamu iphepha" kudingeka ukulungiselela kusengaphambili. Futhi lapha ukukusiza ukuba nakanjani art ahlala isikhathi eside kwe-origami - ukudala kumnandi izibalo ngu alo ephepheni ngendlela ethile.
Ukuphishekela iphepha ukwakhiwa, ubhekene hhayi nje ukwenza indodana ezihlekisayo selithoyisi - ungamfundisa ukusebenza, ukuthuthukisa umcabango, logic, ukuphikelela kanye nezinye, akukho esingabalulekile kangako, u izinga. Ngesibonelo, ungafundisa yakho ingane kanjani isibhamu ephepheni. Phela ezasenkulisa nezingane esikoleni samabanga aphansi ngokuvamile ukudlala kule mpi, nge amavolovolo, nenganono nezinye "umlilo" izikhali bakudala iphepha kukhona okufaneleka kakhulu kunokunye.
Yezandla Origami esikhathini sethu athandwa kakhulu. It is Ngokwenza lokhu addicting futhi abadala, ngisho nokuhlela embukisweni we imisebenzi eseqedile, ezifana izinhlobo iphepha kwezikhali.
Kulesi sihloko sizofunda ngokuthi singakugwema kanjani ukwenza isibhamu iphepha ngezandla zabo. Esikhathini art origami kungekho inkinga. Yiqiniso, une amakhono elula ngephepha, sikelo (lokhu kungenza ngisho ingane zeminyaka 4), futhi uma ncamashi imfundo ehlongozwayo bathathe leli cala, umphumela uyokwaneliswa ukubaqeda iphepha amathoyizi ingane yakho.
Imiyalelo: indlela yokwenza isibhamu aphume iphepha
Isinyathelo sokuqala. Ngakho, ukuze ukwakha isibhamu iphepha, ishidi engenalutho A4 ehhovisi ephepheni. Kuyadingeka ukuba walala isigamu ubude besikhathi, bese isekhondi nengxenye yesithathu. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka mncane, eligoqiwe ibe ngamapayipi, umgqomo komkhiqizo esizayo. Thina bayihlehlise kuze ohlangothini, uqhubekele esigabeni esilandelayo umsebenzi.
Eyesibili isinyathelo. A efanayo iphepha ishidi kukhona ngendlela efanayo, kodwa umphumela uba ukuthola strip ebanzi eligoqiwe. Lokhu nalutho elizoba izikhali isibambo.
Isinyathelo sesithathu. Ngomusa qondanisa kokubili preform ezishintshwe izakhi. I strip ububanzi ukubeka workpiece encani okuyindlela benziwa kufinyelele ekuqaleni kwawo. Imikhawulo ezindaweni eziphansi kumelwe abe ncamashi goba libheke phakathi nendawo, bese - futhi, eduze maphakathi.
Isinyathelo sesine. Eduze kwalapho kumila khona preform ungalilahli sikelo likhulu kakhulu ukusika.
Isinyathelo sesihlanu. Ukwenza inhlamvu ishidi efanayo, kodwa thina uyifaka kakhulu fake futhi ngokunembile iDemo onqenqemeni cishe ukuba phakathi ishidi. Zonke ezinye yokusoka. I tube okuholela eligoqiwe ngesigamu futhi ingena embotsheni.
Isinyathelo sesithupha. Faka imininingwane ezinhle okuholela emaphaketheni workpiece ububanzi. It uphendulela sibalo efaniswe isibhamu esilandelayo. Emikhawulweni egoba ngokushelela, uyonquma ngokweqile.
I isibhamu usulungile.
Qonda incazelo kohlelo ilula. Uma zonke izinto lokwelekelela ulandele iziyalezo ezikuyo, okwamanje iphepha izikhali ukusebenza. Futhi lapho ingane yakho ikubuza mayelana nendlela ukwenza isibhamu iphepha, uzoba empini ukulungela egcwele.
Awazi indlela tie ifindo? Kulula kanjalo nje!
Knacks, noma Indlela Yokwenza umhleli ukusetha isimo
Collar hook. ukunitha isikimu
Yini izinwele straightener engcono kuwe
Kuthiwani uma umfutho ophansi wegazi? Thina uphenyo ndawonye
Izitifiketi izingane: izici Pedagogical nezingokwengqondo
Iresiphi ye-Achamas, isidlo samazwe ngamazwe ngezindlela ezihlukahlukene
Indaba "Ingelosi": isifinyezo, ukuhlaziywa